Finfinnee/Oromiyaa: Irreen Nafxanyummaa akkas Han'ura keenya keessattii nuhiddaa jiruf maali? Kichuu
HomeAfaan OromooNewsFinfinnee/Oromiyaa: Irreen Nafxanyummaa akkas Han’ura keenya keessattii nuhiddaa jiruf maali?
Magaaluma Oromoo kaleessa keessaa buqaanee, lubbuuwwan qaalii 5,000 ittii wareegnee ittii itiitnee deebinee ittii bayyanachu qabnuttii imimmaan dhiiga bohaa Qeerroo Oromoo Keenya dacheesaa keessattii nafxanyaa dhaanamaa jira. Dacheen Dirree Dhawaa , Walloo, Finfinnee guyyuma guyyaan seenaa madeessaa kana keessummeessu irrattii argamu.
Kana hunda maaltu fide yoo jeettan Gantiicha Ilma Abbaa Gadaa Jenner farsaa olutu yakka kana of harkaa qaba. Odoo innii siirna nafxanyaa awwaalamee bollaa baasee faarsu baate, nafxanyummaa isaaniif tumsaa karaa saaqaa jala figaa eege raasu baate salphiina akkanaaf sababnii ittii saaxiilamnuf hin jiru. Abiyyii Ahimad kan yoo yeroon ofirraa kaafne saffiisaan ofirraa darbun ofin of hin furru taate salphina kanaa olii keessaa bahu hin dandeenyeetu Oromoo mudachuuf saaxiluuf jira. Oromoo dammaqii. Kan sif jiru suma. Yeroon humna qabdu hundaan odoo irraa hin qusatin siirna nafxanyaa nu nyaachuf ilkaan qaratu, nuliqimsuf hamummachaa jiru kana yeroo xumura ittii goote ofin of furtu jiraate, yeroon sun amma.
Via: Taagal Daaqaa Waaqgaarii
Oromoo irratti tuttuqaan jabaataa jira. Ummata kanaaf ergaan dabraa jiru fincila keetti deebi’ii dha. Wanni suuraa irratti mul’atu kun tuttuqaa gurguddaa deemaa jiruuf ragaa hanga tokko. Baajaajiin taargaa naannoo Amaaraa ofirraa qabdu gaaffii polisii tokkoon maleetti lafa Oromiyaa seenuun waan akka salphaatti laalamu miti. Suuraa Minilik tahe jedhanii makiinaa irratti maxxanfachuunis dhaadannoo gidduu kana itti jiran ”Nuti ilmaan Nafxanyaati, maal fiddu?” jedhu gochaan agarsiisuu dha.
Qeerroon gochaawwan akkasiitiin dheekkamee socho’es ar’a Finfinnee Boolee Bulbulaatti humna mootummaatiin tumameera. Mootummaan kaleessaa Wayyaaneen toyatame har’a harka Nafxanyaatti kufaa jiraachuu argaa jirra. Oromoon kana callisee hin laalu. Wareegama yoo tahe isaaf haaraa miti. Warri Oromoo arrabsiiftu masaraa sun yoo onnee qabaatte dheekkamsa Oromiyaa keessatti dhoohuuf deemutti fayyadamtee gaaffii saba kanaan deebii itti gooti. Tahuu dinnaan diina waliin qilee buuti.
How dare Qeerroo removes Amharic, they say…
It is only for ”convenience” that Amharic is used outside of schools in Oromiyaa (children should be able to learn in Amharic). There is no legal basis for it to be used at any level and conditions outside of schools. Qeerroo should remove everything that is written in Amharic from Oromiyaa. Ethiopia needs radical change away from Amharic, towards Oromo.
It would be huge development if we can achieve this in town around Finfinnee, and eventually in Finfinnee. Stop the stupid ‘make Afaan Oromo Federal working language’ mantra and act what is legal. Follow the law and make all towns around Finfinnee Afaan Oromo only. That will send a message, bold one.